Waa maxay tamarta korontada: astaamaha iyo saldhigga tamarta korantada laga dhaliyo | Cusbooneysiinta Cagaaran
Waa maxay tamarta korontada
Waxaa jira noocyo badan oo tamarta la cusboonaysiin karo ee adduunka mid walbana wuxuu leeyahay hawlgal gaar ah. Ujeeddadu waa isku mid: in la soo saaro tamar nadiif ah oo ay weheliso eber-ka gaaska lagu sii daayo iyadoo la isticmaalayo xoogaa ilaha dhul aan xadidnayn. Xaaladdan oo kale, waxaan ka hadlaynaa waxa jira quwadda biyaha.
Maqaalkan waxaan kuugu sheegaynaa waxa uu yahay tamarta korontada, maxay tahay astaamaheeda, sida loo soo saaro iyo maxay yihiin faa'iidooyinka iyo qasaaraha ay leeyihiin.
1 Waa maxay tamarta korontada
2 Qaybo ka mid ah saldhigga korontada laga dhaliyo
3 Noocyada dhirta korantada laga dhaliyo
4 Awooda koronto ee Spain
Hydropower waxay isticmaashaa tamarta suuragalka ah ee biyaha dherer cayiman oo sariirta webiga si ay ugu rogto tamar farsamo meesha ugu hooseysa ee sariirta webiga uguna dambeyso tamar koronto. Waxay u rogtaa awooda biyaha koronto. Si loo isticmaalo tamartaan, kaabayaal balaaran oo biyo ilaalin ayaa loo dhisay si loo kordhiyo Awoodda kheyraadkan maxalliga ah, dib loo cusbooneysiin karo ee aan lahayn wax-soo-saarka hawada.
Warshad tamarta korontada ka shaqeysa waa xarumo elektromikhanik ah iyo qalab loo baahan yahay si loogu beddelo tamarta korontada laga dhaliyo tamarta korontada waxayna shaqeyn kartaa 24 saacadood maalintii. Tamarta korantada ee jirta ayaa u dhiganta dhererka socodka biyaha iyo biyo dhaca.
Saldhigga koronto ee ugu caansan adduunka waa waxa loogu yeero «keydka dhexe». Noocyada dhirta ah, biyuhu waxay ku urursadaan biyo xireenka ka dibna waxay ka soo dhacaan meel sare mashiinka marawaxadaha, taas oo ka dhigeysa in mashiinka ay rogrogto oo ay koronto ka dhaliso matoor ku yaal nacelle. Kadibna koranteeda ayaa kor loo qaadayaa si loogu wareejiyo tamarta iyada oo aan khasaaro weyn la gaarin ka dibna lagu daro shabakada. Dhinaca kale, biyaha la isticmaalay waxay ku noqdaan geeddi-socodkooda dabiiciga ah.
Hab kale waa "gudbinta isdhaafsiga." Noocyada noocan ah ee warshadaha korontada ayaa ka faa'iideysanaya sinaan la'aanta dabiiciga ah ee webiga, ka dibna waxay ku wareejinayaan biyaha wadiiqooyinka saldhigga korontada, halkaasoo mashiinnada ay si tartiib tartiib ah ugu socon karaan (haddii wabiga uu leeyahay wicitaan dhaadheer) ama si qotodheer leh (haddii jiiraddu ay hooseyso) ) inuu u ekaado kuwa warshad kayd ah habka loo sameeyo koronto. Noocyada warshadani waxay u shaqeeyaan si joogto ah maxaa yeelay ma haystaan ​​awood ay biyo ku kaydsadaan.
Qaybo ka mid ah saldhigga korontada laga dhaliyo
Warshadda tamarta korontada laga dhaliyo waxay ka kooban tahay qaybaha soo socda:
Biyo xidheen: Waxay mas'uul ka tahay dhexgalka wabiyada iyo haynta meydadka biyaha (tusaale ahaan, kaydadka) ka hor intaan la xirin, iyadoo laga dhex abuurayo kala duwanaansho biyaha loo isticmaalo wax soo saarka tamarta. Biyo xireennada waxaa laga sameyn karaa dhoobo ama shubka (inta badan la isticmaalo).
Isbaarooyinka: Iyaga ayaa mas'uul ka ah sii deynta biyaha qeyb ahaan istaagay iyagoo hareer maraya qolka mishiinka waxaana loo isticmaali karaa baahiyaha waraabka. Waxay ku yaalliin gidaarka weyn ee biyo xidheenka waxayna noqon karaan salka ama dusha. Biyaha intiisa badan waxay ku lumaan jiinka hoostiisa ee biyo xireenka si looga fogaado waxyeelo marka biyuhu dhacaan.
Qaadashada biyaha: Iyaga ayaa mas'uul ka ah aruurinta biyaha la qabtay oo ay ku gaarsiiyaan mashiinka marinnada ama tubooyinka qasabka ah. Marinka biyuhu wuxuu leeyahay albaab lagu jaangooyo qadarka biyaha gaaraya marawaxadaha iyo miiraa looga hortago inay maraan walxaha shisheeye (qoryaha, laamaha, iwm).
Warshad koronto: Mashiinnada (dhalinta matoorrada, mashiinnada korontada ku shaqeeya, fallaadhaha iyo matoorrada) iyo walxaha xakamaynta iyo nidaaminta ayaa halkan ku yaal. Waxay leedahay albaabbada laga soo galo iyo kuwa laga baxo si looga baxo aagga mashiinka biyi la'aan inta lagu jiro dayactirka ama kala-goynta.
Marawaxadaha Haydarooliga: Iyaga ayaa mas'uul ka ah isticmaalka tamarta biyaha ee dhex mara si ay u abuuraan dhaqdhaqaaq wareeg ah oo u maraya tiirarkiisa. Waxaa jira saddex nooc oo waaweyn: giraangiraha Pelton, mashiinnada Francis, iyo marawaxadaha Kaplan (ama kuwa wax kiciya).
Transformer- Qalab koronto oo loo isticmaalo in lagu kordhiyo ama la dhimo korantada wareegga wareega iyadoo la ilaalinayo awoodda.
Khadadka gudbinta awoodda: fiilo gudbisa tamarta la soo saaray.
Noocyada dhirta korantada laga dhaliyo
Waxay kuxirantahay nooca horumarka, dhirta tamarta korantada waxaa looqaybinkaraa sadex nooc:
Dhirta tamarta korantada biyo daadinta: dhirtaan korontada laga dhaliyo waxay ka soo ururiyaan biyaha wabiyada iyadoo kuxiran xaaladaha deegaanka iyo qulqulka marawaxadaha. Isku dheelitir la'aanta ka dhex jirta aagagga biyuhu waa yar tahay, waana xarumaha u baahan socodka joogtada ah.
Dhirta tamarta korontada ku jirta oo leh keydad keyd ah: Dhirtani waxay isticmaashaa qaddar kayd ah oo ah "kor" biyo-xidheenka dhexdiisa. Iyadoo aan loo eegin qulqulka webiga, kaydku wuxuu kala soocayaa qadarka biyaha ee marawaxadaha soo saara korontada sanadka oo dhan. Warshada noocan ah waxay isticmaali kartaa tamarta ugu badan kWh badanaaba way ka jaban tahay.
Saldhigyada bamgareynta biyaha: Dhirtani waxay leedahay laba keyd oo leh heerar kala duwan oo biyo ah, kuwaas oo la isticmaalo marka loo baahdo tamar dheeri ah. Biyaha ka soo baxa kaydka sare waxay maraan marawaxadaha oo ay gaadhaan kaydka hoose ka dibna waxay ku laabtaan haanta sare ee biyaha soo shubaysa inta lagu jiro maalinta ay baahida tamarta yar tahay.
Awooda koronto ee Spain
Horumarka tikniyoolajiyadda waxay keeneen in ilaha tamarta microhydraulic-ka oo leh kharash aad u tartan badan suuqa korontada, in kastoo kharashyadan ay ku kala duwan yihiin nooca dhirta iyo tallaabooyinka la qaadayo. Haddii korontada la rakibay ee warshad koronto ay ka yartahay 10 MW oo ay noqon karto biyo taagan ama qulqulaya, warshada korontada waxaa loo tixgeliyaa inay tahay warshad yar oo biyo-koronto ah.
Maanta, horumarinta qaybta biyaha ee Isbaanishku waxay higsaneysaa inay kororto waxtarka si loo hagaajiyo waxqabadka xarumaha jira. Talooyinkaan waxaa loogu talagalay dayactirka, casriyeynta, hagaajinta ama balaarinta warshad rakibtay. Microturbines Haydarooliga waxaa lagu soo saarayaa awoodo ka hooseeya 10 kW, kuwani waa kuwo aad waxtar u leh ka faa'iideysiga xoogga guurdoonka wabiyada iyo soo saarista korantada meelaha go'doonsan. Marawaxada ayaa si toos ah u soo saarta koronto markii lagu jiro talantaalli ah umana baahna biyo dhacaya, kaabayaal dheeri ah ama kharashka dayactirka oo sareeya.
Isbaanishku hada wuxuu leeyahay ilaa 800 oo dhirta koronto-dhalinta ah oo cabbirkoodu kala duwan yahay. Waxaa jira 20 warshad koronto oo leh in kabadan 200 oo megawat, taas oo wadar ahaan ka dhigan 50% wadarta soosaarka korantada korantada. Dhinaca kale, Spain waxay leedahay daraasiin biyo xireeno yar yar oo leh awood aan ka yareyn 20 megawatts.
Waxaan rajeynayaa in macluumaadkan aad wax badan kaga baran karto waxa uu yahay tamarta korontada iyo sida ay u shaqeyso.
Wadada buuxda ee maqaalka: Cusbooneysiinta Cagaaran » Tamarta dib loo cusboonaysiin karo » tamarta Haydarooliga » Waa maxay tamarta korontada
Waa maxay warshad koronto kuleyliyaha ah